အရောင် Doppler စက်ရုံ - China Color Doppler စက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အရောင် Doppler စက်
ပြုတ်ရည် Pump Шпрမ် pump
၁၅ လက်မ Touch Screen Laptop Ultrasound Sun-800S
GYN, OB၊ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါအတွက် Laptop Ultrasound
SUN-906C အရောင် Doppler
SUN-906B အရောင် Doppler
SUN-906A အရောင် Doppler
CE ပဲ့တင်သံစက်ကိုခင်းကျင်းသည့်အာကာသယာဉ်တွန်းလှည်း Doppler ultrasound အဆင့်ဆင့်
ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ် Sunbright မော်ဒယ်နံပါတ် SUN-908B တူရိယာအမျိုးအစားအမျိုးအစား ၂ အိတ်ဆောင် Ultrasonic ရောဂါရှာဖွေစက်ကိရိယာများ၊ အရောင် Doppler ပုံရိပ် mode 2D, 3D, CF + B မော်ဒယ်တစ်ပြိုင်တည်း၊ PDI, DPDI, TDI, TSI စသည်တို့အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးထိန်းချုပ်မှု YES Probe connectors4PW duplex နှင့် triplex သည်လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲသွားသည်။ ဟုတ်သည် IMT အလိုအလျောက်တိုင်းတာသည်။ ဟုတ်သည် CW လုပ်ဆောင်ချက်။ သေးငယ်တဲ့တန်း ...
၁။ ကြီးမားသော ၁၅ လက်မ LED အရောင်သည်စစ်မှန်သော Doppler ၏ USB port နှင့် VGA port နှင့် probe connector နှစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ပါဝါပိတ်ထားချိန်အနည်းဆုံး ၃ နာရီအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။
၃။ အဓိကအသုံးပြုမှု - ဗိုက်နာခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ၊
4. ပုံရိပ် MODES: B, 2B, 4B, M, B / M, B / C, B / D, B / C / D, B / CFM / D, CF + B မော်ဒယ်တစ်ပြိုင်နက်, PDI အရောင်, Dual အရောင်, တပြိုင်နက်တည်း 2D / 3D / 4D အရောင်ပေါင်းစပ်, PW, CW Duplex / Triplex, CFM, CDE, PD, Directional PD, CD ။ ခန္ဓာဗေဒ M က, အရောင် M က mode ကို
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်မဆိုပရင်တာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော Windows စနစ်ဖြင့် PC အခြေပြု Color Doppler ။ ပုံနှိပ်ထားသောareaရိယာသည်ညှိနှိုင်း။ ရနိုင်သည်။
၆။ DICOM 3.0 ပရိုတိုကောပါဝင်သည်
၇။ ဘာသာစကားမျိုးစုံသောလုပ်ဆောင်ချက် - အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ အာရဗစ်၊ ပြင်သစ်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျာမန်၊
4. ပုံရိပ် MODES: B, 2B, 4B, M, B / M, B / C, B / D, B / C / D, B / CFM / D, CF + B မော်ဒယ်တစ်ပြိုင်နက်, PDI အရောင်, Dual အရောင်, တပြိုင်နက်တည်း 2D / 3D အရောင်ပေါင်းစပ်, PW Duplex / Triplex, CFM, CDE, PD, Directional PD, CD ။ ခန္ဓာဗေဒ M က, အရောင် M က mode ကို
၁။ ၁၅ လက်မ LED အရောင်သည်စစ်မှန်သော Doppler ၏လုပ်ဆောင်မှုကို USB port များနှင့် VGA port များပြသသည်။
၆။ DICOM 3.0 ပရိုတိုကောပါဝင်သည်။
ဖုန်းနံပါတ်: +86 18616107538
လိပ္စာ: အဆောက်အအုံ C6, တရုတ်လုံခြုံရေးချိုင့်, Tongshan နယူးခရိုင်, Xuzhou, တရုတ်